Conveyor Factory, mpamatsy - China Conveyor Manufacturer
Ny conveyor scraper dia misy ampahany amin'ny loha, vatan'ny tanky afovoany, ampahany amin'ny rambony, rojo fitaterana scraper, fitaovana fampandehanana ary fametahana torimaso torimaso. Rafitra mihidy tanteraka, tsy misy famoahana fitaovana mandritra ny fandidiana; rojo conveyor dia mandray rojo rojo, endrika fisehon'ny rojo tokana; ny fanafarana sy fanondranana fitaovana, fampitana halavana dia azo namolavola mora foana sy nalamina mifanaraka amin'ny fepetra takiana.
Ny savaivon'ny mpampita volo karazana LS dia 100 mm- Ny halavan'ny masinina familiana fiara tokana dia mety hahatratra 40m (30m be loatra). Ny milina fanodinana kapila roa dia manangana ny firafitry ny hazo vaky afovoany, ary ny halavany farany mety hahatratra 80m (60m lehibe lehibe).
Conveyor SCG Vibrating
SCG andiana halavirana avo lenta hafanana avo lenta dia be mpampiasa amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, metallurgy, akora fananganana, arina, indostrian'ny simika, voamaina, fanafody ary indostria hafa. Ny mari-pana dia ambanin'ny 300 ℃ ho an'ny karazana vovo, granular, block ary ny fifangaroany.